Maraoka: Fihaviana sy Fanavakavaham-bolon-koditra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2010 21:11 GMT
Maraoka, fihaonan-dalan'ny tontolo Atsinanana sy Andrefana, ny tontolo Eoropa sy ny tontolo Arabo hatry ny ela dia firenena ahitana fahasamihafana amin'ny lafiny maro, ary mihoatra noho izany aza, mahazaka ny tsy fitoviana amin'ny lafiny maro ny Maraokana. Amin'ny lafiny hafa, tahaka ny nosoratan'i Smahane Bouyahia indray anefa dia hitan'ireo vahiny ho toa ny firenena miavonavom-bahiny izy.
Ao amin'ny lahatsoratr'i Bouyahia, ny misy kokoa dia ny ny fanavakavaham-bolon-koditra mihatra amin'ireo Mainty hoditra any Maraoka. Mandrafitra ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy miaraka amin'ny Maraokana, Saharahoia, mpifindra monina sy mpianatra avy any atsimon'i Sahara ny mainty hoditra ary ao koa ny Afrikana-Amerikana mbamin'ny Eoropeana. Na dia tonga noho ny antony samihafa avy any amin'ny faritra maro aza irey vahiny mainty hoditra ireo dia tafaray ho vondrona iray satria avakavahan'ny teratany Maraokana. Hoy manko i Bouyahia nanoratra:
Tao anatina fanadihadihana ny Talk Morocco sy ny Togozine.com, nizara ny fiainana amin'ny maha mpianatra azy tany Rabat ny mpianatra iray antsoina hoe Christophe, ary niteny:
Tsy ireo mpitoraka blaogy rehetra no miombon-kevitra amin'ity fiampangana ho fisian'ny fanavakavaham-bolon-koditra ity. Xoussef, raha nanadihady ny lahatsoratra tamin'ny teny nanoratan'i Bouyahia azy dia manoratra fa:
Ny lahatsoratra nadika nosoratan'i Bouyahia dia nivoaka tao amin'ny Morocco Board, ary niteraka adihevitra mafana.
Ny sarin'ireo mpitendry zava-maneno nalain'i eryoni dia hita ao amin'ny Flickr ary nampiasana ny Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic.